निबन्ध : भोक - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : प्रवेश निषिद्ध गोलार्धमा
कविता : अलिकति फेरिनुस् मन्त्रीज्यू ! →
यसो सोच्छु आजभोलि- मान्छेलाई डोर्याउने भोकले रहेछ । मान्छेलाई नचाउने भोकले रहेछ । मान्छेलाई नङ्ग्याउने र फेरि बचाउने पनि भोकले नै रहेछ । यसो भएपछि फेरि सोच्छु- ‘जीवन भन्नु त भोकै मात्र रहेछ वास्तवमा ।’ अलि अस्ति एउटा निबन्धमा लेखेको थिएँ- ‘जीवन भनेको ढोका रहेछ ।’ आज फेरि लाग्दैछ- ‘जीवन भनेको भोक पो रहेछ ।’ जब विचार गर्छु- के ढोका र भोक बिल्कुलै फरक कुराहरू हुन् त ? हो जस्तो पनि लाग्छ झट्ट हेर्दा तर गहिरिन्छु, सेती नदी पोखरामा भास्सिए जसरी नै भास्सिन्छु विचारको गहिरो भासमा । र, भेट्छु अर्को एउटा झिल्को उज्यालोको- भोक र ढोका ठ्याक्कै एकै नभए तापनि विल्कुलै फरक कुराहरू पनि होइन रहेछन् । ढोका खोलेर अघि जान भोक लाग्नुपर्छ । ढोकाको अर्थलाई त भोकले सार्थकता दिने रहेछ । त्यसो हुँदा यी दुई आपसमा ज्यादै सम्बन्धित रहेछन् ।
जीवनलाई बाटोमा यसरी नै हिँडाउँदाहिँडाउँदै काठमाडौँ खाल्डोको एकरसे जीवनले दिनदिनै डसेर थिल्थिलो पारिरहेको बेलामा एक दिन एउटा बाटोले स्वाट्ट लिएर बुटवल पुर्यायो । त्यो केही दिनको बुटवलमा बस्नुपर्ने र त्यसैको सेरोफेरोमा कविता लेख्नुपर्ने अवस्था मेरो ‘पुग्नु’ भएको थियो त्यसबेला । तर केही दिनपछि नै थाहा भयो त्यो त कहाँ ‘पुग्नु’ थियो र । पसिना ओभाउञ्जेलको छोटो सुस्केरा मात्र पो थियो त्यो । र, त्यो बसाईंमा पनि निरन्तर गति थियो, भोकको आगो थियो । घर, जागिर, परिवार त्यसरी नै अनेकौँ अभाव र आवश्यकताको तनावबाट मुक्त त्यो छोटो अवधि जीवनको नयाँ अध्याय भएर लेखियो स्मृतिमा र अक्षरहरूमा पनि । स्मृति त कुनै दिन भोक सकिँदा मेटिएर जाला तर अक्षरहरू रहलान् बाँकी । तिनै अक्षरहरूमा चमेराभै”m झुण्डिएका भोकहरूले उज्यालाका केही झिल्काहरू पनि छाड्लान् कुनै दिन- एउटा सानो आशा- मेरो अर्को भोक ।
लमतन्न सुतेका सडकहरूमा तँछाडमछाड गर्दै गाडीहरू होइन भोक गुडेको देख्थेँ । स्कुलका लुगाहरू लगाएर सडकमा विद्यार्थीहरू होइन भोक हिँडेको देख्थेँ । झुण्डझुण्ड भएर चौतारामा भोकहरू नै बसेका हुन्थे र बन्धनरहित गफहरूमा बगेर सकिँदै गइरहेका थिए । प्रचण्ड गर्मीमा सडक छेउमा केही भोकहरू मकैसँगै पोल्थे यौवन र सपनाहरू । केही भोकहरू सर्वतपानीमा मिसाएर आफ्ना अधुरा आकाङ्क्षाहरू बेच्दै थिएँ र भोकलाई केही शान्त पार्न खोज्थेँ । भोक नै किराना पसलहरूमा छरिएको, मः मः र अन्य खानेकुरा पाइने रेष्टुरेन्टभरि भोक पाकिरहेको र प्लेटहरूमा भाग लगाइएको देख्थेँ । भोक नर्सिङ होममा उपचाररत देखिन्थ्यो, चौराहमा प्रदर्शित थियो र रात्रिकालीन जीवन र डान्स बारहरूमा धमाधम नाङ्गदिै बिक्री भइरहेको थियो । ए, त्यति मात्र कहाँ र ! फूलबारी र पार्कहरूमा गएर हेरेको त आफैंलाई समेत बिर्सेर भोक त ‘प्रेम’मा मग्न, आफ्ना सम्पूर्ण अहंहरू झुकाएर सिद्धबाबाका पाउमा अर्पित र साइबरहरूमा झुम्मिएको पाएँ इन्टरनेट अघिल्तिर कल्पँदै – कसरी हाल्ने हो पखेटा र भुरुर्र उडेर जाने हो सात समुद्रपारि उतै हराउन ।
देखेँ एउटा नदी बगिरहेको सहरको बीचैबाट । त्यो नदीको नाम तिनाउ भए पनि वा अरू कुनै भए पनि कुरा एकै हो, त्यस्तो फरक केही देखिनँ । अहिलेलाई त्यसको नाम तिनाउ नै भनुँ । तर यो नदी बेलाबेलामा मान्छेका सपनाहरूमाथि बग्छ, अस्मितामाथि बग्छ- कहिले हिलैहिलो भएर र कहिले रगतजस्तै रातो भएर । जसरी बगे पनि यो नदी भोक बग्छ, समय बग्छ । हामी नदीमा सभ्यता देख्ने मानिसहरू हौँ तर नदीमा सभ्यता पनि बगेको देख्ता भने अनौठो, उदेक र वाक्वाकी लाग्दोरहेछ । मैले त तिनाउमा सभ्यता र त्यसले बोकेको सौन्दर्य चाहिँ बग्दै गएको र अराजकता, अविश्वास र विभेद जति बालुवा र ढुङ्गामुढा जति किनारमा छोडिए जसरी मिल्किएर छोडिएको देखेँ । यसपछि भने भाउन्न भएर थचक्क भुइँमा बसेँ र खुइय्य लामो सास फेरेँ । मनमनै सोचेँ- ‘हिँड्न जानेन भने जतिसुकै ठूलो बाटोबाट हिँडे पनि र जति हिँडे भने पनि कहीँ पनि पुगिँदैन रहेछ ।’ यसै सहरको अनुहारलाई राम्ररी नियाल्दा यही देखिँदोरहेछ । यो एउटा बगिरहेको नदीले बीसौँ वर्षसम्म मैले किताब पढ्दा पनि बुभ\_mन नसकेको सत्यलाई कति सजिलैसँग बुझाइदियो एकै पल्टको पाना पल्टाइमा ।
फर्किएँ पर क्षितिजतिर । “जीवन त साह्रै सुन्दर रहेछ ।” डुब्दाडुब्दैको घामले भन्यो । क्यान्सरले मर्न लागेको एउटा मान्छे, डाक्टरले जम्माजम्मी बाँच्ने दिन तोकिदिएको र त्यही तोकिएको जीवन बाँचिरहेको ऊ पनि त्यही डाँडामाथिको घामजस्तै हो । आजसम्म बाँचेको सम्पूर्ण जिन्दगीको सार खिचेर उसले एउटै वाक्यमा भन्यो-
दिनभरि अरू केही नसुनुँजस्तो, विश्वविद्यालयले कहिल्यै दिन नसकेको ज्ञानको बत्ती कत्ति सजिलै बालेर उज्यालो बनाइदियो मेरो जीवन तर आफू भने चुर्लुम्म डुब्यो आँसु र कालो अँध्यारोमा- “अब त थकथक मात्र लाग्छ ।” मलाई सिस्नोपानीले हिर्कायो उसको भनाइले र ब्यूँझाइदियो घोर निद्राबाट । भोक जागेर क्लाइमेक्समा पुगेको बेलामा जीवन साह्रै नै अस्थिर र अशान्त हुँदोरहेछ । पछाडि फर्केर हेरेँ पानीजस्तै बगेर गएको आफ्नो उमेर र सतर्क भएँ । ‘थकथकाउने काम कहिल्यै गर्नु नपरोस् जीवनमा’ आँखा चिम्म गरेर कामना गरेँ । छाती भरिएर आयो, उठेर हिँडिहालेँ या भनौँ भागेँ कठोर सत्यसँग ।
थकाइ लाग्यो । सम्झें- ‘जीवनमा थकाइ पनि छ । थकाइ चौतारो हो यात्रालाई एकछिन बिसाउने र बाटोको बारेमा चिन्तन गर्ने ।’ भोकको मात्रालाई नापजोख गर्ने अवसर पनि हो चौतारो । थकाइलाई पनि माया गरेँ स्फूर्तिलाई जस्तै । यो थकाइ पनि मेरो आफ्नै हो ।
थकाइलाई शान्त पारेर उक्लँे माथि फूलबारीतिर । जीवनमा त फेरि रङहरू पनि छन् । फूलबारीमा फूलहरू मुस्काएका । सम्मोहित भएर सायद, हात अघि बढाएको मात्र थिएँ- लेखिएको देखेँ सूचना- “कृपया फूललाई हातले नछुनुहोला ।” टक्क अडिएँ र सोचेँ – ‘काँडालाई पनि त छुनु भएन, घोचिहाल्छ ।’ फिस्स फुस्किएर झरेँ ओठहरूबाट पातलोसँग र तिनै फूलहरूका रङहरूमा मिसिएँ । काँडा छ र पो फूलको पनि महìव छ त । फूलको महìवलाई बढाइदिने काँडालाई पनि किन हेप्नु र । “काँडालाई पनि फूलकै छेउमा राखेको राम्रो !” फूलकै आँखा छलेर सुटुक्क लेखेँ डायरीमा ।
केटाकेटीहरू पाएँ खेलिरहेका, केटाकेटीहरू । भनिहाले- “अङ्कल, हाम्रो पनि फोटो खिचिदिनुस् न ।” फोटोप्रति जागेको उनीहरूको भोकलाई शान्त पार्ने प्रयास गरेँ फोटो खिचिदिएर तर फोटोमा त फोटो मात्र देखेँ । उनीहरूको जीवनको सौन्दर्य त खिचिएनछ । कठै ! पलपलमा सौन्दर्य छोडिँदै र खस्तै बाँकी रहेको मूढो जस्तो जीवन घिसारिरहेका छौँ । तैपनि विवश छौँ, सार्थकता खोजिरहेका छौँ । फेरि सम्झें आफ्नै हजुरआमालाई । नब्बे वर्षसम्म मान्छेको जीवन बाँचेर मायामोहका यावत् तँछाडमछाड, तानातान गर्दागर्दै, मेरोमेरो भन्दाभन्दै, सकिन्छ कि आजै, भोलिलाई पनि चाहिन्छ भन्दाभन्दै सबैलाई झुक्याएर सुटुक्क मान्छेको जुनी छोडेर फोटो भइदिनु भयो उहाँ कत्ति सजिलै ।
आखिर हामी सबैको जीवन बग्न रोकिएको दिन फोटो नै हुने रहेछ । भोक सकिएको दिन हामी फोटोमा चढ्ने रहेछौँ र प|mेमको सीमित आयतनभित्र अटाउने रहेछौँ । कठै ! मुटु निचोरिएर आयो र हुरुक्क हुने गरी भोक लाग्यो जीवनको । कविता खोज्दै हिँडिरहेको बेलामा भाइबहिनीले फोटो खिच्न चाहनु र आफ्नै हजुरआमालाई फोटोभित्र सीमित भएको भोग्नुपरेको विवशतालाई एकैचोटि सम्झें । कत्रो विरोधाभास छ जीवनमा । फेरि जीवन सकिनै लागेको मान्छेले भन्दै थियो- “जीवन त साह्रै सुन्दर रहेछ ।” यी एकएक ओटा पाठहरू हामी जीवन केही बाँकी रहेकैहरूले पाएका छौँ । यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ, ठानेँ ।
(स्रोत : मधुपर्क २०६६ चैत)